YINTONI IZAMBATHO EZISEMGANGATHWENI? - UHLOBO
Yintoni iZambatho eziSemgangathweni?
Xa kuziwa ekucaciseni zonke iindlela zokunxiba ezahlukileyo ezikhoyo, kunokuba nokudideka kancinci-ngakumbi xa kufikwa kwisinxibo esisesikweni. Ngapha koko, ukuba ufunda le nto, sele uzibuzile ukuba yeyiphi na into esesikweni ethethayo, kubandakanya nokuba yeyiphi na indlela esesikweni ngayo, ingaba ixhaphake kangakanani (ukuba ikho), kunye nento onokuhamba nayo ngokunxiba iminyhadala kunye nezihlandlo ezibiza isinxibo esisesikweni.
Ngelixa zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kubandakanya indawo yomnyhadala, ixesha lomnyhadala, ixesha lonyaka, nangaphezulu, sibeke isikhokelo ngokubanzi esiya kukunceda ubeke umdibaniso ofanelekileyo kuyo nayiphi na imeko -Umcimbi osesikweni owufumene kwikhalenda yakho.
Ukubeka nje, isinxibo esisesikweni siwela embindini wesinxibo esimnyama nesinxibo sobungcali kwezeshishini; ayisiyonto yokunxiba okanye yesiko njengeqhina elimnyama, kodwa isesikweni kancinci kunale nto ubuya kuyinxiba kuseto lweofisi yemveli (okt ayiyiyo iofisi yokuyila, enekhowudi yokunxiba ethambileyo). Isinxibo esisesikweni samadoda sihlala siqulathe iisuti ezibini ezilungisiweyo kunye neqhina, nangona kunjalo, kuxhomekeke kumnyhadala okanye umsitho, usenokungafuni tie kwaphela.
Ukongeza, ukuba umsitho usebusuku, uya kufuna ukunxiba isuti ngombala omnyama, nangona kunjalo, ukuba isiganeko sakho senzeka ngexesha lasemini, unokuhlala unxibe isuti yombala okhanyayo-kwakhona, konke kuxhomekeke kwitheko, useto, kunye nokuninzi.
Yintoni ongayinxibi kuMnyhadala oSesikweni
Nika ingqalelo apha, bantu - zininzi izinto ongafanele uzinxibe kwiminyhadala efuna isinxibo esisesikweni. Okokuqala, awusoze udlale i-tuxedo ukuya kumnyhadala osesikweni, njengoko i-tuxedos yindlela esesikweni kwaye uya kujongeka ngokungathandekiyo, nangona unxibe ii-nines. Khumbula loo ndawo kwi Inyathelo labazalwana apho uFerrell noJohn C. Reilly banxibe tuxedos kudliwanondlebe nomsebenzi ? Ewe, ufuna ukunqanda ukujongeka lonto .
Umkhono omnyama nomhlophe we tattoo
Kwicala elingaphandle kwembonakalo, akukho nto imbi ukwedlula ukunxiba ngokupheleleyo kumsitho ofuna isinxibo esisesikweni, hlukana neekhakis, iibhulukhwe ezimfutshane, kunye nedenim, kunye nehempe zepoksi, ijezi, ihempe, iiteki, iimbadada okanye izilayidi. , kunye nezambatho zangaphandle njengeebhatyi zedenim, iibhatyi zesikhumba, okanye iibhombu.
Ngawaphi amaXesha kunye / okanye imisitho onokuyinxiba iZinxibo ezisesikweni?
Ukuya kuthi ga ngawaphi amaxesha okanye iminyhadala onokuyinxiba ngokungafaniyo nesinxibo esisesikweni, kuya kuxhomekeka kwinto ekufuneka ikhowudi yokunxiba. Imitshato, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, ngesiqhelo ukubheja okukhuselekileyo kwezemidlalo isinxibo esisesikweni. Eminye iminyhadala enje ngemyuziyam okanye ukuvulwa kwegalari yobugcisa, iinkomfa zeshishini, okanye iminyhadala yekhaphethi ebomvu ifuna isinxibo esisesikweni.
Amanqwanqwa amaSemi aSemthethweni
Xa kuziwa ekukhetheni umphezulu olungileyo kumnyhadala osesikweni, awusoze uhambe gwenxa ngeqhosha elimhlophe, elinemikhono emide ezantsi, nangona kunjalo, kuxhomekeke kwityala, ngokuqinisekileyo ungahamba ngokunxiba imibala eyahlukeneyo, engwevu , ngasemva, luhlaza okwesibhakabhaka, okanye kupinki okhanyayo. Zama i I-Banana Republic i-Slim-Fit enganxibanga ihempe , eza ngokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okanye okumhlophe, kwihempe yokunxiba eya kusebenza ngeesuti ezininzi. Ukongeza kwiqhosha lakho lemikhono emide ezantsi, ukuba uziva ungaphezulu kwe-snazzy, ungongeza ivesti ehambelana nengubo yakho yesuti kunye neebhlukhwe.
Ukuthetha ngeesuti, indoda nganye ifuna ubuncinci isuti enye eya kuthi isebenzele uluhlu lwezinto eziziingqondi ezikhethekileyo kwimisitho esesikweni, ke kubalulekile ukuba utyalomali kwenye ukuba awukabinayo. Khumbula, iisuti azifanelanga ngaphandle kokuba zombini iibhulukhwe kunye nebhatyi zenziwe ngento enye; akufuneki unxibe ibhlukhwe yesuti ngebhatyi eyahlukileyo, kwaye akufuneki unxibe idyasi yakho yesuti ngebhulukhwe eyahlukileyo. Kwisuti yeklasikhi enomgangatho wangoku, zama I-Calvin Klein Men's Slim Fit 2-Piece Wool Suit , eza ngemibala emine eyahlukeneyo (eluhlaza okwesibhakabhaka / engwevu, ngwevu emnyama, ngombala, nomnyama) kwaye ilungele nawuphi na umsitho osesikweni.
Ukufikelela kwimibala yesuti, konke kuxhomekeke kwixesha lomsitho oya kuwo; ukuba uya kumsitho wasemini, unganxiba isuti ngombala okhanyayo, njengegrey okanye i-khaki, kwaye ngekhe ujongeke endaweni. Ukuba uzimasa umsitho wobusuku obuqhelekileyo osesikweni, ncamathela kwimibala emnyama, enjenge-navy, emnyama, okanye i-oxblood.
Ngamanye amaxesha ungahamba kunye hayi ukunxiba isuti kumsitho osesikweni; Kule meko, unokudibanisa ibhulukhwe yokunxiba ephucukileyo kunye neblazer combo kwaye udlale ujikeleze ngemibala kunye neepateni kancinci, nangona kunjalo, ukuba awazi ukuba uza kuthwaleka ngokudibanisa iimpahla ezinje, Eyona nto ibhetele ukunamathela kwisuti yakudala kunye neqhina lokudibanisa. Zama i I-Bonobos engakhange yenziwe i-Wool Blazer yase-Italiya , eza ngemibala eli-10 eyahlukeneyo, ukuba ujonge iblazer enxibe iimpahla ezisemthethweni.
Bona ngakumbi malunga - Isikhokelo seNdlela yokuKhangela kuMtshato
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uninzi lwesinxibo esisesikweni sifuna isuti enamaqhosha amabini, nto leyo ethetha ukuba iblukhwe yesuti yakho kufuneka yenziwe ngezinto ezifanayo nengubo yakho yesuti.Ukuba ukhetha ibhulukhwe yokunxiba kunye neblazer combo, qiniseka ukuba iblukhwe yakho yokunxiba ilungelelaniswe kakuhle kwaye ilungile ngokufanelekileyo; ukuba zinkulu kakhulu okanye zincinci kakhulu, uya kunamathela ngaphandle njengesithupha esibuhlungu, ujongeke ungakhathali, kwaye ujongeke ngathi khange ubeke nasiphi na iingcinga kwisinxibo sakho.
Jonga i I-Bonobos Yolula ibhulukhwe yangexesha laphakathi evekini .
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, awusoze unxibe izihlangu eziqhelekileyo, ezinje ngeziteki (nokuba ziyilo), izihlangu zesikhephe, izilayidi, okanye izihlangu ze-tuxedo kumnyhadala osesikweni. I-Oxfords, i-brogues, okanye i-loafers ezinxibayo zezona zikhethiweyo ezifanelekileyo kwizihlangu ezisesikweni.
Ngesihlangu esidala esinokunxitywa unyaka wonke kwaye uya kuhamba nayo nantoni na ekhabhathini yakho, jonga UAllen Edmonds wesihlanu kwiCape-Toe Oxford eWalnut , eya kujongeka intle iisuti zayo yonke imibala.Ukuba ufuna ukuyitshintsha kwaye uhambe kwindlela yesonka, zama Ingqokelela yeVerace Men's brown Polished Leafers Shoes , Ezongeza into ephucukileyo nenodidi kuyo nayiphi na isuti esesikweni.
Ukuya kuthi ga ngoku kwezincedisi, uninzi lweziganeko ezisesikweni ziya kufuna ukunxiba iqhina, nangona kunjalo, iqhina alisoloko lifuneka. Oko kwathethi, xa ungathandabuzeki, nxiba iqhina, njengoko unokuhlala ulikhupha ukuba uziva ngathi uxinekile okanye ulungile. Awusoze uhambe gwenxa ngombala oqinileyo wombala, nangona ukuprinta okufihlakeleyo kuyindlela elula yokongeza i-pizzazz nakweyiphi na imbonakalo esesikweni. Zama i UMichael Kors ubotshiwe , eza ngemibala emihlanu eyahlukeneyo kwaye inikezela ngendlela ecekeceke kodwa etsala amehlo, yohlaziyo olutsha kwitayi yeklasikhi.
Iifilipino tattoos zesizwe kunye neentsingiselo
Ukuba ukhetha indlela ye-no-tie, ungasoloko usongeza isikwere sepokethi kwidyasi yakho-jonga i I-Gucci eprintiweyo yeSilk-Twill Pocket Square i-accessory ye-semi-formal ye-luxury engayi kuphula i-bhanki kwaye iya kuba yinto ekhangelekile njengesihogo.Unganxiba iwotshi engaphantsi kwesinxibo sakho esisesikweni, njenge I-1844 Chronograph evela malunga neVintage .
Bona ngakumbi malunga - Yintoni impahla yokunxiba engaqhelekanga?
uyilo lwesango lomthi lamakhaya
iiTattoo zokudibanisa indoda nomfazi
Ndifanele ndicebise malini ngomculi wam we tattoo
Iingelosi zamaphiko tattoo kumphambili
eyakhelwe kwisikhululo sokuhlamba inja
imigangatho yethayile kunye nemithi kunye